Ra'iisul-wasaare kuxigeenka Turkey oo Booqday Muqdisho. VOADooro Luqad kale
Axad, Bisha Shanaad 01, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 12:53
Ra'iisul-wasaare kuxigeenka Turkey oo Booqday Muqdisho. Daabaco
Bakir BoztagxBakir Boztag
Ra'isul Wasaare ku xigeenka Turkiga Bakir Boztag oo maanta booqasho ku tagay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladiisa ay mashaariicda horumarineed ee ay ka wado Muqdisho ay ku fidin doonto gobolada kale ee Soomaaliay.
Waxuu booqday goobaha uu mashaariicda ka wado Turkiga waxuuna kulan la qaatay madaxweynaha Dowladda Somalia Xassan Sheekh Maxamud iyo Ra'isul Wasaare Cabdi Farax Shirdoon Saacid , oo labaduba ka hadlay booqashada Ra'isul Wasaare ku xigeenka Turkiga iyo Mashaariicda dowladiisa ay Soomaaliya ugu talagashay.
warbixin ku saabsan halka hoose ka dhageyso.
Dhageyso warbixinta booqashad Bakir Boztag ee Muqdisho